July | 2016 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
July 31, 2016 drkokogyi
အမုန်းသစ္စာ ခိုင်မာလာ သြဇာ အာဏာစက် တမြုံလုံး ပျက်
July 31, 2016 July 31, 2016 drkokogyi
သြဇာ အာဏာစက် တမြုံလုံး ပျက်။
When there are floods in Mandalay, we remember our late father
When there are floods in Mandalay, we remember our late father.
Our father usedalot of his time to spend together with us. If there are floods in Mandalay, he will put all of us on the car (9318) in the evenings to drive around the Gaw Wein bank of Irrawaddy river or sometimes up to Saging bridge to watch the water level.
And on almost every weekend he would drive us to the Taung Thama for picnic. I remembered that he had even invited our relatives to follow that picnic. We used our dodge lorry (8189).
အပတ်စဉ် ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာလဲ မိသားစုလိုက် တောင်သမန်အင်းကို
ပျော်ပွဲစားထွက်ပေးတယ်……
Myanmar NLD Government arrested the Pakistan preacher NLD အစိုးရရဲ့ အဆင်အခြင်ကင်းမဲ့စွာ လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်အတွက်…ပြင်ပက အစ္စလာမ်ကမ္ဘာမှာ အများကြီး ဂယက်ရိုက်လာမှာ မြင်ယောင်ပါသေးတယ်
‘‘ဒီပုဂ္ဂိုလ်က သူတော်စင်ကြီး ပါ။ သူ့တပည့်တွေက ပင့်ဖိတ်လို့ တရားလာဟောပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ သူအခု ဒီမှာ ဟောခဲ့တဲ့ တရားခွေလည်းရှိပါတယ်။ နားထောင်မယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ နှလုံးသား လမ်းစဉ်၊ ကျင့်စဉ်တွေကိုပဲ ဟောပြောသွားတာပါ။ ဘာသာရေး အပုပ်ချတာတွေ၊ ဘာတွေ လုံးဝ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို ဖြစ်သွားတော့ အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရတော့ ပြောစရာဖြစ်သွားတာပေါ့’’
(ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့မှ အစ္စလာမ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးလွင်)
Even racist Thidagu came to Malaysia to preach… IF that criminal Thidagu is arrested for preaching without permit in Malaysia…what will you do.. The time will come.
စင်္ကာပူ မလေးရှား UAE လိုနိုင်ငံတွေမှာဆို
Khin Mg Ayeshared ဦးဘုန်း(ဓာတု)
(နီးနီးဝေးဝေး အတွေးလက်ဆောင်များ စာအုပ်မှ သူ့ဖခင်၏ခံစားချက်များ)
အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်ပ် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်နေကြပြီလား ဒုက္ခသည်များတတိယနိုင်ငံ အခြေချပို့ဆောင်ပေး နေတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ…..မွတ်စလင်တွေအတွက် အခွင့်အရေး မရရှိနိုင်တော့ဘူး
July 30, 2016 July 30, 2016 drkokogyi
အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒေါ်နယ်လ်ထရမ့်ပ်အမေရိကန်နိုင်ငံက သမ္မတဖြစ်မလာခင်ကထဲက တင်ကြို ပြီး
ဒီကနေ့ မလေးရှား..UNHCR ရုံးက ထွက်လာတဲ့သတင်းအရဆိုရင်…..အမေရိကန်နိုင်ငံ ကဦးဆောင်နေတဲ့….ဒုက္ခသည်များတတိယနိုင်ငံ အခြေချပို့ဆောင်ပေး
နေတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ…..မွတ်စလင်တွေအတွက် အခွင့်အရေး မရရှိနိုင်တော့ဘူး…..
ဒုက္ခသည်များကို အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပို့ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့….နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေကလဲ….ခရစ်စယန် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက အဓိကဖြစ်နေတော့…………ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့ကတော့……အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝိတ်နဲ့ ဖိအားပေးရင်…မျှော်လင့်ချက်ရှိကောင်း
မြန်မာမွတ်စလင်တွေအတွက်ကတော့ (ယနေ့ကြားရတဲ့ သတင်းအရ ဆိုရင်)
တတိယနိုင်ငံကိုအခြေချရေး ဆိုတာ….အလှမ်းဝေးသွားပါပြီ….
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အတိုင်းအဆမရှိ…ခွဲခြား ဖိနှိပ် ချု ပ်ချယ်မှုတွေကို အချိ န်မှီ မဟန့်တားကြ မကာကွယ်ကြ….မရပ်တန့်ကြဘူးဆိုရင် အဆုံးတနေ့မှာ နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်တွေက စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်း ကို ခံရပါလိမ့်မယ်
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အတိုင်းအဆမရှိ…ခွဲခြား ဖိနှိပ် ချု ပ်ချယ်မှုတွေကို
အချိ န်မှီ မဟန့်တားကြ…မကာကွယ်ကြ….မရပ်တန့်ကြဘူး……ဆိုရင်………….
အဆုံးတနေ့မှာ……နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်တွေက စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်း
လူမှုရေး/ နိုင်ငံရေး/ စီးပွားရေး/ ပညာရေး….အဖက်ဖက်က ခွဲခြား ကန့်သတ် ဖိနှိပ်ခံနေ
ရပြီး…..နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို အငြင်းပယ်ခံနေရသူ….နေ့စဉ်နဲ့အမျှ…နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့
ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက် တာကိုခံနေရတဲ့လူငယ်တွေဟာ……….အချိ န်မရွေး……. အစွန်းရောက်သမားတယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်….ဆိုတာကို….သတိပြုသင့်ပါတယ်…..
Bloody Indian Intelligence collaborated with nasty Bangladesh propaganda units to shamelessly INVENT this kind of fake news.